Ihe ị ga-ahụ na Saint Malo, France | Njem akụkọ
France nwere ebe mara mma ebe ejikọtara nka na akụkọ ihe mere eme. Otu n'ime ha bụ Saint Malo, ebe nlegharị anya kacha ewu ewu na French Brittany. Ọ bụrụ na ị hụrụ foto n'anya, chere ruo mgbe ị ga-ahụ ihe niile nnukwu ụlọ ochie a ga-enye ndị ọbịa na-anụ ọkụ n'obi.
Taa, ihe ị ga-ahụ na Saint Malo, France.
2 Ihe ị ga-ahụ na Saint Malo
Akụkọ ihe mere eme nke a okwute agwaetiti amalite na ntọala nke obodo na XNUMXst narị afọ BC, ọ bụghị kpọmkwem n'otu ebe kama ọ dị ezigbo nso. A wuru Aleth Fort, ebe St-Servan na-eguzo taa, bụ nke a ebo Celtic ichebe ọnụ ụzọ osimiri Rance.
Mgbe ndị Rom bịarutere ha chụpụrụ ha ma wusie ebe ahụ ike. Ka oge na-aga, na narị afọ nke isii, ndị mọnk Irish rutere ebe a Brendan na Aron, ma guzobe ebe obibi ndị mọnk.
Agwaetiti nke A na-ejikọta Saint-Malo na ala site n'okporo ụzọ ájá na n'oge a na-awakpo Viking ime ihe ike bụ akụkụ nke nchebe ebumpụta ụwa ha. Bishọp Jean de Chatillon gbakwunyere mgbidi na mgbidi na ya na narị afọ nke XNUMX, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ nchekwa.
N'ime oge ndị bi na Saint Malo malitere inwe mmetụta siri ike nke nnwere onwe na nke ahụ na-egosi ha maka ma ọ bụ megide ndị ọchịchị Britain, France, na England nwere. Ndị na-akwọ ụgbọ mmiri ya bara ọgaranya, a makwa na ha na-ezu ohi ụgbọ mmiri ndị si mba ọzọ na-esi n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ eruo. N'ezie, ha bụ ndị corsairs ma ọ bụ ndị omekome gọọmentịs, ma mee ihe ka ukwuu n'ime narị afọ nke iri na asaa na nke iri na asatọ n'okpuru nchebe nke eze France. Ndị ama ama Patent nke corso.
Otu n'ime ndị ọrụ ụgbọ mmiri a ma ama nke France, bụ onye A na-enweta nchọpụta Canada na-aga n'ihu, ọ bụ Jacques cartier, onye obodo Saint Malo. Site na nkwado nke Francis I nke France, o mere njem atọ na North America na narị afọ nke XNUMX ma bụrụ nke Europe mbụ rutere n'ebe a na-akpọ Montreal-Quebec ugbu a. O mere ala ndị a baptizim dị ka "Canadá", okwu sitere na ndị mbụ bi n'ógbè ahụ na nke pụtara obere obodo.
N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, obodo ahụ mebiri emebi nke ukwuu. Ọ bụ onye America General Patton a ma ama, bụ onye gbara obodo ahụ gburugburu wee tụọ ya nnukwu bọmbụ ruo mgbe ndị German nyefere onwe ha. Ngụkọta nwughari nke ebube na ịma mma nke Saint Malo chọrọ Afọ 30 nke nwughari.
Kedu ka esi aga Saint Malo? Enwere ọtụtụ ụzọ mana nke kachasị ewu ewu bụ site ụgbọ mmiri si n'ụsọ oké osimiri ndịda England ma ọ bụ site na Channel Islands. Enwere ụgbọ mmiri Brittany na-ejikọta Portmouth, na England, na Saint Malo na-eme ịgafe asaa kwa izu na njem awa itoolu, Condor Ferries na-ejikọta otu ihe ahụ kamakwa ebe ndị ọzọ n'ụsọ oké osimiri Bekee. N'akụkụ aka nke ọzọ ị nwere ike iji ụgbọ elu gaa, ọdụ ụgbọ elu dị kilomita 14 site na nnukwu ụlọ, ma mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-agbazite ụgbọ ala n'ihi na ọ dịghị ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko na-ejikọta.
Ọ bụrụ na-amasị gị ụgbọ oloko ọdụ ụgbọ oloko dị kilomita abụọ ọwụwa anyanwụ nke nnukwu ụlọ. Nwere ike gaa na Paris na njem nke awa atọ na nkeji iris, si Montparnasse ọdụ, na a ngụkọta njem nke awa asaa. Ọ bụrụ na ịnọ na London ị nwekwara ike ịga, site na St. Pancras ruo Paris na site n'ebe ahụ TGV gaa Saint Malo.
Ihe ị ga-ahụ na Saint Malo
Nke mbu bu ụlọ elu. Ọ bụ ihe kacha mkpa njem nlegharị anya mma: ya warara n'okporo ámá, ya ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ya ụlọ ahịa… Ọ bụ oké izu ụka ebe. Ụlọ elu ahụ dị n'àgwàetiti granite na ebe ọ bụ na e bibiri ihe niile na Agha Ụwa nke Abụọ, ikuku oge ochie bụ ihe sitere na nnukwu ọrụ mweghachi, ọrụ dum nke e mechara na 1971.
Taa ị nwere ike ịga ije dum ụzọ nke mgbidi na embankments, na-anụ ụtọ echiche, na-anụ ụtọ ya osimiri, pụọ iri nri, zuru ike na-eji kasị mma ogologo izu ụka ị pụrụ iche. Saint Malo bụ ebe kacha mma maka nke a.
N'ime ụlọ elu ahụ bụ Château de Saint Malo, nnukwu, taa converted n'ime obodo Ụlọ Nzukọ na Museum nke Saint Malo. N'ime ụlọ ihe ngosi nka enwere ọtụtụ ihe ngosi, mana nke kachasị mkpa bụ nke na-ekwu banyere akụkọ ihe mere eme nke ụgbọ mmiri nke obodo na ọrụ, mbibi na nwughari na Agha nke Abụọ.
Ọzọkwa n'ime Citadel bụ Katidral nke Saint Vincentt ya gburugburu ụlọ elu na-ebili n'elu okporo ámá. Enwere ụlọ ụka n'otu ebe a kemgbe narị afọ nke XNUMX, mana Katidral Gothic dị ugbu a sitere na narị afọ nke XNUMX. Ị ga-ahụ ebe a ihe ncheta na-echeta ọpụpụ Jacques Cartier na Canada.
La Ọnụ ụzọ ámá Saint Vincent Ọ bụ isi n'ọnụ ụzọ Citadel. N'ime na n'ihu Castle dị Ebe Chateaubriandtaa akụkụ kacha ndụ nke obodo nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. N'èzí ọnụ ụzọ ámá ahụ bụ ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, enwere L'Hotel d'Asfeld, nnukwu ụlọ nke narị afọ nke XNUMX onye a na-agụ n'etiti mmadụ ole na ole nwere chi ọma bụ ndị lanarịrị bọmbụ ahụ. Ọ bụ onye nwe ụgbọ mmiri bara ọgaranya, onye isi ụlọ ọrụ French East India Company, Francois-Auguste Magon rụrụ ya.
N'akụkụ ndịda nke mgbidi dị Port nke Dinan, Ebe na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnya ụgbọ mmiri. Enwere ụgbọ mmiri na-akwụsị ebe a obere oge mgbe ị na-aga n'osimiri ma ọ bụ n'akụkụ ụsọ oké osimiri na-aga Cape Frehel. Ọ na-ejikwa ụlọ ọkụ ya akara mmalite nke Moles des Noires.
N'aka Porte des Bes, nke na-enye ohere na nsọtụ ugwu nke Bon Secours Beach, ha bụ Ubi Vauverts na ihe oyiyi nke corsair obodo a ma ama, Robert Surcouf. Northwest nke ramparts bụ ụlọ elu, ndị Ụlọ elu Bidoune, na ihe ngosi nwa oge.
N'èzí mgbidi Saint Malo, n'azụ ọdụ ụgbọ mmiri dị na ndịda nke nnukwu ụlọ, dị Mpaghara kacha ochie, nke e hiwere n'oge ndị Rom: Saint Servan. N'akụkụ osimiri ahụ ị ga-ahụ ihe dị egwu Ụlọ elu Solidor, wuru iji chebe ọnụ ụzọ nke Rance, taa na ihe ngosi nka. Njem ahụ na-ewe nkeji 90 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya.
Ogige osimiri Rance mara mma nke ukwuu kwa. Obodo dum dị n'akụkụ nnukwu ụlọ ahụ mara mma nke ukwuu O nwere ụlọ nke ndị ahịa bara ọgaranya nke Saint Malo. ụfọdụ nwere ubi ya ghere oha ọha, dịka ọmụmaatụ, Parc de la Briantais. Enwekwara nke akwarium, ya na nnukwu tankị shark ya.
Mpaghara Parame ọ toro kemgbe ọtụtụ afọ ma taa na-arụ ọrụ dị ka ebe mmiri mmiri nke Saint Malo n'onwe ya. Osimiri ya dị kilomita atọ n'ogologo, ọ bụ isi ihe na-adọrọ mmasị ya, ọ bụ ezie na mgbe oke mmiri dị, ọ na-ekpuchi ya. Ị nwere ike ịnọ ebe a, enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ chere ihu n'oké osimiri.
Na-ekwu maka osimiri na oké osimiri, ndị mmadụ na-achọkwa nke a, n'ofe nnukwu ụlọ. Osimiri na agwaetiti Saint Malo na-anabatakwa ndị ọbịa n'oge ọkọchị. N'ụsọ osimiri ya nwere ọmarịcha aja na-acha ọcha na enwere ntakịrị agwaetiti okwute nke ị nwere ike iru achịcha. Ọtụtụ n'ime àgwàetiti ndị a ha nwere ihe mgbochi ochies, ili na n'ezie, nnukwu echiche nke gburugburu.
Aja ahụ ekpughere na-eme ka o kwe omume ịga ije ọkara sekit nke Old Town n'akụkụ ọdịda anyanwụ yana n'akụkụ ugwu n'etiti Moles des Nories na nnukwu ụlọ nke Saint Malo. N'ebe ọwụwa anyanwụ nke nnukwu ụlọ bụ Nnukwu osimiri nke na-abanye na mpaghara Parame. Ọ bụrụ na-amasị gị echiche nke ịga n'àgwàetiti ndị ahụ, mgbe ahụ, ụgbọ mmiri nhazi oge dị n'ọnụ ụzọ Porte St. Pierre.
The Mole Beach ọ dị anya na ndịda ma dịkwa n'etiti Mole des Noires na bastion nke Holland. Osimiri ahụ dị ntakịrị ma bụrụkwa ebe nchekwa ya mere ọ bụ ebe a na-achọsi ike n'oge okpomọkụ. Bon Secours Beach bụ nnukwu na ogologo a na-enweta ya site n'akụkụ ugwu nke Holland Bastion site na Porte St Pierre. Enwere klọb ịkụ azụ na mgbago mgbago n'okpuru ọnụ ụzọ. Ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ịsa mmiri n'oké osimiri bon oké osimiri ọdọ mmiri mgbe mmiri dị obere.
Chateaubriand bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị France na onye edemede ịhụnanya sitere na Saint Malo.. Udi ya dị n'agwaetiti Grand Be, otu n'ime agwaetiti nkume ndị ị nwere ike iji ụkwụ rute. E liri ya n’ebe a n’ihi na ọ chọrọ ka ebe a bụrụ ebe izu ike ikpeazụ ya. Ọ bụ na 1848 ma ị ga-ahụ obe dị mfe nke na-ele anya n'oké osimiri. N'aka nke ọzọ bụ Petit Be, àgwàetiti ọzọ a pụrụ iji ụkwụ rute ma ọ bụrụ na mmiri dị ntakịrị.
Ebe a na Petit Be ka echekwara nke ọma Fort du Petit Be mkpakọrịta nwoke na nwaanyị site n'oge Louis XIV na nke meghere ndị ọbịa n'oge na-adịbeghị anya, mgbe niile na mmiri dị ala. Ị ga-ahụ ụfọdụ egbe egbe mara mma nke ukwuu. Nke Eventail Beach ọ dị ná mpụga mgbidi nke ugwu nke nnukwu ụlọ ahụ. Ọ bụ otu n'ime osimiri atọ kachasị ewu ewu na mpaghara ahụ, enwere atọ, yana etinyere ya na Grand Plage ma ọ bụ Playa Grande na Fort National.
National Fort a malitere na 1689 Vauban haziri ya, yana ahịrị agbachitere Saint Malo ndị ọzọ. Ebumnuche ya: chebe ndị nzuzo French na mwakpo Bekee ma ha na-eme nke ọma mgbe niile. Njem nke ebe ahụ siri ike na-ewe ihe karịrị ọkara otu awa ma ị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ dị n'okpuru ala, yana enwe mmasị na binoculars ndị a na-etinye na mgbidi.
N'ikpeazụ, Kedu ihe ị ga-eme na nso Saint Malo? Kedu ihe njem nwere ike ime? Ọfọn, enwere ọtụtụ na nke kachasị mma bụ na ị gaghị enwe ụgbọ ala n'ihi na ụgbọ oloko na ụgbọ ala na-ekpuchi ọtụtụ ebe ndị a. ị nwere ike ịga na Mont St. Michel, ruo obodo Dinan nke ochie, ị nwere ike ikpokọta osimiri ma na-agafe Cancale, Dinard onwe ya ma ọ bụ Raldsọ mmiri Emerald.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Ihe ị ga-ahụ na Saint Malo, France